Howlgallo waaweyn oo lagu qaaday Saldhigyo Shisheeyaha ku leeyihiin dalka Maali. – Shabakadda Amiirnuur
Howlgallo waaweyn oo lagu qaaday Saldhigyo Shisheeyaha ku leeyihiin dalka Maali.
April 15, 2018 7:53 am by admin Views: 59
Wararka maanta oo Axad ah naga soo gaaraya dalka Maali ayaa ku waramaya in howlgallo waaweyn ay ruxeen xarumo dhowr ah oo ay ku suganyihiin ciidamada Shisheeyaha ee Faransiisku hor boodayo ee duulaanka ku joogo wadanka muslimka ah ee Maali.
Howlgallada oo ah kuwa qorsheysnaa, isku waqtina billowday, loona adeegsadya xeelado kala duwan ayaa si isku mid ah u beegsaday garoonka Tembakto oo ah saldhiga ugu weyn ee Faransiisku ku leeyahay Maali, saldhig milliteri oo ku yaala Tembakto, iyo goobo kale.
Wararka qaar waxay sheegayaan in camaliyaad istish-haadi ah lala eegtay goobahas, kadibna la maqlay rasaas xoogan iyo jugta madaafiicda waaweyn, oo loo badinayo iney ahaayeen hoobiyaal ay rakibteen Mujaahidiinta.
War kasoo baxay isbaheysiga duulaanka ku jooga Maali ee ay hogaamineyso dowladda Faransiiska ayaa lagu sheegay inay jiraan weeraro xoogan oo lagu soo qaaday saldhigyadooda, balse faafaahin kama bixin khasaaraha soo gaaray.
Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa si firfircoon uga howlgasha wadamada dhaca saaxilka iyo saxaraha galbeedka Africa, welina wax war ah kama soo bixin oo ku aadan howlgallada maanta dhacay.